UNFOLDED: usoro ohuru maka njikwa data gbasara ohere - Geofumadas
Machị, 2021 ọtụtụ
Na mbipụta nke 6 nke Magazin Twingeo, anyị nwere ike ịtọ ụtọ nke ihe ikpo okwu ọhụrụ maka inye ohere data data gbasara ohere Emeghariri Studio. Ihe omuma a ohuru nke kemgbe February 1, 2021 na-enye ndi mmadu okwu maka ihe ndi o gha eme maka nhazi na njikwa nke usoro data.
Ọ na-ekwu maka otu ndị okike ya si wee zụlite ọrụ a ruo mgbe ọ pụtara na Unfolded, dabere na teknụzụ nke mbara igwe dị ka kepler.gl, deck.gl na H3. Ihe ikpo okwu nke ebumnuche ya bu oru oma nke Big Data, ya na ihe ngwube nke ogwugwu na ngosiputa ngwa ngwa iji hazie usoro data. Isi usoro dabere na ike g3 hexagonal.
Grid H3 a bụ usoro ndọtị geospatial, yana nke a na-ekewa ihu ụwa n'ime mkpụrụ ndụ mkpụrụ ndụ hierarchical, a ga-ekewa mkpụrụ ndụ nke ọ bụla n'ime ndị ọzọ na ihe ndị ọzọ. Emepụtara ya site na Uber maka nyocha na njikarịcha nke data gbasara ohere, yana maka njikwa nke ahịa dị ike - ịnye na mkpa.
Na Unfolded ị nwere ike ịmepụta maapụ ole na ole clicks, na site na ihe nchọgharị. Na njirimara 8 dị mkpa, Unfolded Studio na-enye ohere:
Mepụta maapụ n’enweghị nsogbu
Ngosipụta ngosipụta dị ukwuu
Nnyocha nyocha nke ike iji nyere ndị ọrụ aka ịchọpụta nghọta
Nchekwa igwe ojii maka data geospatial
Otu-pịa map ebipụta
Mfe ntinye nke usoro data geospatial
Akpaaka iji nweta data n'ime na n'èzí ngwá ọrụ ahụ
Ayszọ iji mepụta ngwa ọdịnala na map
Ndị na-emepeghị emepe Isaac Brodsky, Ib Green, Shan He, na Sina Kashuk na-emepe teknụzụ ndị dị elu dị ka kepler.gl, deck.gl, na H3 ihe karịrị ọkara afọ iri ma ugbu a jikọtara ọnụ iji weghachite nyocha ala.
Site na akaụntụ Google ma ọ bụ site na itinye ozi-e, emepụtara profaịlụ iji malite ịme eserese. N'otu aka ahụ, ọ ga-ekwe omume ijikọ ebe ọrụ ma ọ bụ ngwaọrụ njikwa otu dị ka "Slack". N'otu aka ahụ, enwere ogwe njikwa data na igwe ojii, data niile ebugo na ikpo okwu bụ nke onwe, ruo mgbe onye ọrụ chọrọ ịkekọrịta ya site na URL, nkata, email, nseta ihuenyo ma ọ bụ netwọ mmekọrịta (twitter, LinkedIn, Facebook ma ọ bụ Reddit).
Ndị ahịa azụmahịa nwere ike ịnweta data na ikpo okwu a na-emeghe site na Data SDK - API REST - site na ihe nchọgharị weebụ ma ọ bụ iwu a kapịrị ọnụ. SDK a na-enye ohere ijikọ eserese, data, ọrụ yana arụmọrụ. Ọ na-emekwa ka okike nke eserese eserese, mmekọrịta ma ọ bụ ụdị dị iche iche wee nye njikwa data gosipụtara ma ọ bụ na eserese ngosi.
Mgbe ị na-emekọrịta na ikpo okwu, a na-akọwa interface na arụmọrụ ọ na-enye, yana ọdịiche ya na desktọọpụ GIS dị ka ArcGIS ma ọ bụ QGis dịka ọmụmaatụ. Ọ na - agwakọta ike niile nke GIS dị iche na teknụzụ ọhụụ na nke ọhụụ.
Emeghi Studio Emegheghi maka usoro eji eme ihe GIS. Ọ na-elekwasị anya na nyocha data dị ukwuu na idozi nsogbu nsogbu siri ike site na ndị ọkà mmụta sayensị data na ndị nyocha.
A kọwara njirimara dịka nyocha nke anụ ahụ, dị mkpa mgbe ịnwere otu ma ọ bụ karịa datasets ma ịchọrọ iji anya nke uche gị hụ mgbanwe na ụzọ ọsọ ọsọ na animated. N'otu aka ahụ, enwere ike ịmegharị nyocha ndị a na mbara igwe.
N'otu aka ahụ, a na-ahapụ ihe edeturu ebe ndị guzobere Unfolded soro ndị ọrụ ha na-emekọrịta ihe iji nweta site na ha nzaghachi ka mma banyere arụmọrụ nke ikpo okwu. N'otu aka ahụ, ha na-eme nnwale iji mepụta ngwa ọrụ ọhụụ ma ọ bụ atụmatụ ndị na - eme ka ahụmịhe ahụ bawanye ọgaranya karị.
N'aka nke ozo, maka ndi ohuru ka ekpughere, ha nwere ohere inyocha nkuzi ha metụtara: itinye data na map, nyocha data, data data ma obu animations. Ọ bụ ikpo okwu nke na-ekwe nkwa iweta nnukwu ịtụnanya na obodo nyocha data gbasara obodo.
Nke ndị ọzọ ka ọ bụ ịkpọku gị ka ị gụọ ọhụụ ọhụrụ nke Twingeo Magazine. Anyị na-echeta na anyị ghere oghe ịnata akwụkwọ ma ọ bụ mbipụta ị chọrọ igosi na magazin ahụ. Kpọtụrụ anyị site na ozi ịntanetị editor@geofumadas.com na nchịkọta akụkọ@geoingenieria.com.. Magazin a na-ebipụta dijitalụ usoro -lelee ya ebe a- Gini ka ichere ibudata Twingeo? Soro anyị na LinkedIn maka mmelite ndị ọzọ.
Previous Post«Previous Lomalọma - BIM Ọkachamara Ọdịdị
Next Post Akụkọ banyere achụmnta ego. Geopois.comNext »